MRB Shaqada counter taxane HPC
Qaar badan oo naga mid ah Xisaabinta shaqadawaa alaab shati leh. Si looga fogaado xatooyada, ma aanan saarin waxyaabo aad u badan bogga. Waxaad la xiriiri kartaa shaqaalaheena iibka si ay kuugu soo diraan macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan ku saabsan Miiska degitaanka.
Taxanahan alaabtu waxay u heellan yihiin miiska degista ee Xakamaynta Shaqada, taasi waa, markay garato inay ka sarreyso qiimaha loo dejiyey, qaylo-dhaan ayaa loo diri doonaa si loo gaaro ujeeddada lagu xakameynayo qulqulka dadka, waxaan leenahay qaabab badan oo Xisaabinta shaqada tixraac ahaan.
Dhamaadkii 2014, magaalo weyn oo ku taal Shiinaha horay uma lahayn nidaam lagu xakameeyo dadka degan, taas oo kicisay dhacdo aad u weyn. Bishii Diseembar 31, magaaladani ma aysan qabanin waxqabadyo sannadka cusub, laakiin dad badan ayaa wali si iskiis ah u tegey magaalada. Meel caan ah oo magaalada ka mid ah ayaa laga fuliyay Sannadka Cusub, laakiin si lama filaan ah ayay u keentay musiibo. Sababta tooska ah ee musiibada ayaa ahayd in qulqulka dadka ku socda Bund uu aad u badnaa. Sababtoo ah ma jirin nidaam lagu xakameeyo dadka degan, ma jirin tirakoob waqtigiisa lagu fidiyo socodka dadka. Marka haddaba aan ka hadalnoMiiska degitaanka.
Sidee loo tiriyaa qulqulka intaa leeg ee dadka? Tani waa inuu sameeyaa xirfadleMiiska degitaanka. Miiska degitaankawaa shey cusub oo ku saleysan infrared, 2D, 3D, AI iyo teknoolojiyada kale. Waxay leedahay tirinta saxda ah iyo gudbinta xogta xasiloon. Waxa ugu muhiimsan waa hawlgalka mobiladaha casriga ee mobilada, taas oo ka habboon uguna dhakhso badan.Dareenka tirinta shaqooyinka wuxuu diiwaan galiyaa tirada dadka ee qulqulaya inta udhaxeysa inta waxsoosaarka wax ku oolka ah, wuxuuna u gudbinayaa xogta mobiilka gudihiisa si falanqeyn loogu sameeyo softiweerka, xogta la falanqeeyay sidoo kale si toos ah ayaa loo dhoofin karaa si loo soo saaro warbixinno.
Dareenka tirinta shaqooyinka sidoo kale wuxuu dhexgalin karaa xog weyn. Waxaa guud ahaan loo adeegsadaa suuqyada waaweyn ee laga dukaameysto, hoolalka bandhigga, maktabadaha, tiyaatarada filimada, saldhigyada tareenka, iyo meelaha dalxiiska loo dalxiis tago iyo meelaha kale ee caamka ah, maxaa yeelay qulqulka dadka ku dhaqan goobahan waa kuwo aad u ballaaran una baahan xirfadleDareenka tirinta shaqooyinkasi loo ururiyo tirakoobka. MRBDareenka tirinta shaqooyinka waxay soo saari kartaa xogta socodka dadka wakhti kasta oo loo baahdo, waxayna abuuri kartaa jaantus saacad, maalin, usbuuc, bil, iyo sanad, si ay si sax ah u tirakoobi karto, u dhexgelin karto xogta, ugana soo dejiso warbixinnada boosteejooyinka moobaylka. Daadinta iyo Xakamaynta Degganaanta waa la samayn karaa isla waqti isku mid ah. Marka qulqulka dadku ka bato qiimaha la dejiyey, alaarmiga ayaa la kicinayaa
MRB Shaqada laga soo duubay video
Waxaan leenahay noocyo badan oo IR ah Miiska degitaanka, 2D, 3D, AI Miiska degitaanka, had iyo jeer waxaa jira mid adiga kugu habboon, fadlan nala soo xiriir, waxaan kugula talin doonnaa midka ugu habboon Miiska degitaanka adiga 24 saac gudahood.
Hore: MRB wireless Dadka waxay ka hortagaan HPC005
Xiga: MRB miiska rakaabka otomaatigga ah ee baska HPC168
Dhisida Kaaliyaha Shaqada
Sensor Counter Sensor
Counter-ka Kormeerka Shaqada
Kaaliyaha Meheradda Dukaan